A Galaxy S6 Edge + ayaa dab qabadsiiya iyadoo la isticmaalayo xeedho rasmi ah | Wararka IPhone
A Galaxy S6 Edge + wuxuu dab qabsadaa isagoo isticmaalaya xeedho rasmi ah
Caadi ma ahan in aaladda mobilada uu dab qabsado, laakiin waxaa jira warar badan oo ku saabsan. Wararkii ugu dambeeyay ee taleefan casri ah oo holac qabsaday ayaa ahaa Samsung Galaxy S6 Edge + laga bilaabo isticmaalaha Reddit ubaahan_qarsoodi, yaa arkay sida qalabkiisu u bilaabay inuu cabo sigaar iyo dhimbiil wax yar uun ka dib markuu bilaabay inuu lacag galiyo. Laakiin waxaa jirta xaqiiqo xiiso leh oo maskaxda lagu hayo.
Markii ay jireen shilal noocan ah, caadiyan had iyo jeer waxay ahayd in qalab saddexaad loo isticmaalo, sida fiilooyinka lacag-bixinta ee tayada shaki leh. Laakiin, kiiskan, isticmaaluhu wuxuu hubiyaa in xeedho uu adeegsan jiray ay ahayd a xeedho rasmi ah ka yimid Samsung. Waxa kale oo laga yaabaa inay muhiim tahay in la xuso in aanu ahayn xeedho la timid Galaxy S6 Edge +, laakiin halkii ay ahayd Galaxy S3 oo ka timid iibsi hore.
Galaxy S6 Edge + dabka ayaa isticmaalay xeedho rasmi ah
Ma isticmaalin xeedho ay la timid, laakiin waxaan isticmaali jiray xeedho Samsung ah oo aan ku helay GS3-kayga. Telefoonku kumuu hoos jirin barkimadayda, laakiin wuxuu igu tiirsanaa sariirtayda. Waxaan ku baraarugay dhawaqa dhimbilo iyo qiiq xun oo ka soo baxaya.
Nasiib wanaag, cidna kuma dhaawacmin, laakiin suurtagalnimada inay taasi nagu dhacdo, iyadoo aan loo eegin aaladda aan soo shubaneyno, waxay muujineysaa inaysan ammaan ahayn in aan isku seexano moobil ama qalab kale oo elektiroonig ah inta ay amreyso.
Wixii sababay dabka, way adkaan doontaa in la ogaado illaa Samsung ay baarayso kiiska, laakiin haddii adeegsaduhu uu isticmaalayay xeedho muddo dheer oo uusan waligiis wax dhibaato ah qabin, waxay u badan tahay inuu ahaa Galaxy S6 Edge + taasi waxay lahayd a qalabka guuldaraysiga. Mulkiilaha taleefanka ayaa la xiriiray Samsung wuxuuna sugayaa inuu helo bedelka aaladda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » A Galaxy S6 Edge + wuxuu dab qabsadaa isagoo isticmaalaya xeedho rasmi ah
Waxaan dhihi lahaa dab ayey qabataa oo ma shido. 🙂
Aan aragno ... Shabakaddu waxay ku saabsan tahay Apple ee kuma saabsan Samsung.
Warkan hadda iPhone wax macno ah ma sameynayo haddii uusan ku xirneyn kiisas la mid ah oo ka dhacay iPhone-ka. Aan khusayn ... Waxay u muuqataa in markay wax xun Samsung ka soo baxaan si fudud loo dhejiyo maxaa yeelay waa Samsung xD iyo Samsung CACA! Ha noolaado Apple !! si fiican, ma aha sidaas.
PS: Waxaan hayaa iPhone mana jecli Samsung.
Aan aragno ... Haddii aadan jeclayn, ha u aqrin si fudud
Ps ma jecli samsung sidoo kale
Kuu danayn maayo. Aniga Hadalna ixtiraam badan.
Immisa iphone ayaa qarxay? .Ha weydiin wax intaa ka badan! hahahajajjajj
Waa hagaag, maahan inaanan danaynayn laakiin waa run inay iyagu kaliya ka sheegaan warka xun ee Samsung taasna waa khalad, anshax ahaan marka loo hadlo, sidaa darteed waxaan ku raacsanahay FALCON, beddelka magaca imika IPHONE EE IYADOO LAGU HAYO IPHONE ANDROID
Cidna ugu jawaab
Waxaan sidoo kale xiiseynayaa aniga iyo ixtiraam badan dadka
Gustavo calle (@cadey_daahir) dijo
Ku jawaab gustavo calle (@guscall)
Hagaag, ha aqrin waana intaas!
Cid ma caydaa? Waa maxay "slime" ??? Naftaada u hibee wax kale, hadaadan jeclayn waxaad aqriso waxaad kaga tagi kartaa dabayl cusub. Oo baro inaad ixtiraamto dadka Niñato !!
Waad ku mahadsantahay wararka Pablo.
Waxay iga dhigtay mid aad u qosol badan markii aan rakibey bogga waxa ugu horeeya ee aan arko uu ahaa sawirka aniga oo aan faahfaahin badan aan ka fikiray: ummm barbecue xD
Ka dibna markaad akhrido inuu mobayl ahaa, qiyaasi qosolka xD
eyelets shiilan dijo
Ma doonayo inaan difaaco Samsung, haddii aan bixiyo, waan bixiyaa laakiin ...
ka hadalka samsung dab qabsada barta tufaaxa ayaa, uguyaraan, loo sameeyay si loo sii daayo bile samsung
Kajawaab dabada la shiilay
Fahmaan in ay jiraan waqtiyo badan oo tan ay ku dhacday taleefannada Apple, markaa mar haddii ay dhacdo, ugu yaraan si guud, oo ku taal saldhiga Samsung, ma aysan awoodin inay iska caabiyaan.
Sikastaba, waxaan u arkaa wanaag in wararka noocaan ah lagu daabaco webka. U ogolow qof walba inuu ka feejignaado warkan oo ka taxaddar marka uu qalabkiisa ku amraya.
Baro qorista adigoon qaladaadka higgaadinta, aqoon lahayn.
Ligia Cardenas dijo
Runtu waxay tahay in fiilada la socota qalabka ay aad u khafiifsan tahay aadna u kululaatay, sababtaas awgeed dadka isticmaala waa inay u beddelaan Samsung asal ah laakiin ka sii dhumuc weyn. Taasi waa inay tixgeliyaan mudanayaasha Samsung, lafteeda aad ayey qaali u tahay in sidoo kale laga fikiro beddelidda qalabka.
Jawaab Ligia Cardenas
Waa inaan idhaahdaa caydaada hoosteeda waad ku ilaalinaysaa qofkasta oo noloshiisa ku bixinaya cay, waxaan nahay dad ilbax ah oo aan jeclayn kuwa u muuqda kuwo bahallo ah, anigoo tixraacaya Samsung waxaan haystay dhawr Samsungs wax la mid ahna waligay iguma dhicin sida xeedho Shiine ah oo aniga ila ah, iyo wax kale oo aan u malaynayo iPhone ma haysto tikniyoolajiyadda Samsung, shaashad aad u sarraysa, filimo qeexitaan sare leh iyo ciyaaruhu waxay u muuqdaan kuwo ka duwan aaladda kale, halkaasna waa ...
Miyaanu joogin maamule halkan ka saara faallooyinka aflagaadada ah ee loo yaqaan 'troll Falcon'? In kasta oo ay u muuqato inaanay ka badnayn 12 sano, dabeecadaha qaarkood waa in aan loo oggolaan bog loo malaynayo inay halis yihiin.
La tirtiray Sidii ay ahayd inay noqotaba, waa la qiimeeyaa.
Shirkadda 'Coach' waxay soo saari doontaa xarigyo kala duwan oo loogu talagalay Apple Watch
Horumar sameeyaha wuxuu ku shaqeeyaa Windows 95 Apple Watch